थ्री एम (मिनिस्कर्ट, मोवाइल र मोटरसाइकल)को अनुगमनमा उच्च माध्यामकि शिक्षा परिषद् - E Net Nepal
Home Social News थ्री एम (मिनिस्कर्ट, मोवाइल र मोटरसाइकल)को अनुगमनमा उच्च माध्यामकि शिक्षा परिषद्
थ्री एम (मिनिस्कर्ट, मोवाइल र मोटरसाइकल)को अनुगमनमा उच्च माध्यामकि शिक्षा परिषद्
२ भदौ । विद्यार्थीले लगाउने पहिरनदेखि तिनले प्रयोग गर्ने मोबाइल र मोटरसाइकलमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका विषय आचासंहितामा राखिएको छ । अहिले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले चोकचोकमा बसेर विद्यार्थीले कस्तो पोशाक लगाए ? के बोके ? अनुगमन गरिरहेको छ ।
विद्यार्थीलाई अनुसासनमा राख्ने भन्दै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले आचारसंहिता तयार गरेको एक वर्ष भयो । आचारसंहितालाई शिक्षा मन्त्रालयले समेत पारित गरेको थियो । अहिले भने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का कर्मचारीले विद्यार्थीले कस्तो पहिरन लगाउँछन् भनेर बाटोबाटोमा बसेर फोटो खिचिरहेका छन् ।
एउटा टोलीमा ३ जना रहने ६ ओटा टोलीले बाटोबाटोमा छात्राको पहिरन अनुगमन गरिरहेका छन् । किन गर्नु प¥यो त यस्तो अनुगमन भन्ने प्रश्नमा उच्चमाध्यामिक शिक्षा परिषद्का प्रवक्ता भन्छन्– ‘आचारसंहिताको पालना भएन, विद्यार्थीहरु अनुशासनबाट विचलित हुन पुगे, विद्यार्थीहरुलाई सही बाटोमा ल्याउन अनुगमन आवश्यक देखियो ।’
हुन त कतिपय सरोकारवालासमेत कस्तो पहिरन लगाउने कस्तो खाना खाने अनी कसरी दैनिक जिवन चलाउने भन्ने व्यत्तिगत स्वतन्त्रता मान्छन् । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गर्नुपर्ने अरु अनुगमनका काम नगरेर सस्तो लोकप्रियताका लागि बाटोबाटोमा बसेर विद्यार्थीका गतिबिधि अनुगमन गरेको आरोप उनीहरुको छ । निजी कलेजले जथाभावी शुल्क लिएकोदेखि परिषद्ले तोकेका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति नदिने गरेका बिषय परिषद्ले अनुगमन नगरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । परिषद् भने मिनिस्कर्ट मात्र नभइ सबै विषयको अनुगमन गर्ने प्रवक्ता बताउँछ ।
हुन त विद्यार्थीको पढाइसंग उनिहरुले लगाउने पहिरनले खासै अर्थ राख्दैन । तर पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले भने विद्यार्थीको पोशाकले अनुसासनमा ठुलो महत्व राख्ने भन्दै नियन्त्रणको प्रयासमा छ । परिषद्का पदाधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविन चलिरहेका बेला शुरु गरिएको यो अनुगमन देखाउन मात्रै गरिएको त होइन ?